ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်စိတ်ဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်း..Love, - MyanmarMagazine
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်စိတ်ဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်း..Love,
ကိုယ့်လင်ယောက်ျားတွေကို ပြုစုအားပေးချင်တဲ့ မိန်းမတွေအတွက် ဒီမှာ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ရေးပြပါမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြုစုအားပေးချင်ရင်တော့ အချိန်ပေးပြီး သူ့အကြောင်း လေ့လာရမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပျော်စေတဲ့ အရာ ၇ ခုကို နမူနာအနေနဲ့ ရေးပြပါမယ်။
၁. ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက်ပါ
မိန်းမ တော်တော်များများဟာ လင်တွေ သားတွေကို ဂရုစိုက်ရလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင် ဂရုစိုက်တာဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ လှပနေခြင်းနဲ့ သူများတွေကို လေးစားပေးတာပါ။
၂. နင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဂရုစိုက်ရင် ငါပိုချစ်တယ် လို့ ပြောခြင်း
ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မလုပ်ချင်ဆုံး အရာဟာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မိန်းမက ကျွန်တော် ကျန်းမာရေးလုပ်ရင် သူပိုချစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စစ်ဆေးခြင်းကစပြီး ဆေးသောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာ စားခြင်းထိပါ။ အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော် အလိုလို ပိုပြီး ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မိလာတာပါပဲ။
၃. ကျွန်တော့်ကို သူမရဲ့ ဟီးရိုးတစ်ယောက်လို ခံစားမိစေခြင်း
ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို လေးစားအားကိုးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တာဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခံစားမှု တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်က သူမအတွက် ဟီးရိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း သူမက သူမ မဖွင့်နိုင်တဲ့ ဘူးတွေ ကျွန်တော့်ဆီ ယူလာပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူမရဲ့ သူရဲကောင်းပါ တဲ့။ အဲဒီ လို ပြောခံရရင် ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ဘဝရဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေမှာ သူရဲကောင်းဆန်တာလေးတွေ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
၄. ကျွန်တော့်ကို သင်က ချစ်တယ်ဆိုတာ သိအောင် လုပ်ပေးရင် ကျွန်တော်ကလဲ ပြန်လုပ်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ချစ်မေတ္တာကို ခံစားချင်ပေမယ့် အချိန် ကြာလာရင် စစ တွေ့ခြင်းကလောက် မခံစားမိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မိန်းမဟာ ကျွန်တော့်ကို ချီးကျူးရမယ့် နေရာလေးတွေကို ရှာဖွေနေပြီး ကျွန်တော့်ကို သူမချစ်တာ သိစေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကျွန်တော့်ကို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပြီး ချစ်ရည်လွှမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။
၅. ယောက်ျားပီသခြင်းရဲ့ ရှေးစံနှူန်းတွေကို နှစ်ယောက်လုံး စွန့်လွှတ်ပါ
ယောက်ျား ပီသမှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေဟာ အမြဲ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အရင်ကတော့ ယောက်ျားဖြစ်လာရင် လိုက်နာရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ ခံစားချက် မပြတာ၊ မငိုရတာ၊ အကူအညီ မတောင်းရတာ၊ အမြဲ တောင့်တောင့်တင်းတင်း နေရတာ လိုမျိုးပေါ့။ ခုခေတ်ကတော့ ယောက်ျားပန်ကန်ဆေးလို့ရတဲ့ ခေတ်ပါ။
၆. ယောက်ျားပီသမှုဟာ ပြသနာ မရှိပါဘူး
ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ သူတို့ ယောက်ျားပီသမှုနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မလုံမခြုံ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ မိန်းမတွေက အဲဒီလို ပူပန်နေတာကို နားလည်ပေးရပါမယ်။ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းကလေးနဲ့ တူနေတာ၊ ယောက်ျား မပီသမှာကို အရမ်း ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ကို နားလည်ပေးပြီး အားပေးသင့်ပါတယ်။ “You are my man” ဆိုတဲ့ စကားလေးလိုပေါ့။
၇. ယောက်ျားတွေကို အရှက်ရအောင် မလုပ်ပါနဲ့
အရှက်ဟာ ယောက်ျားတွေအတွက် ခံစားရအခက်ဆုံးအရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အရှက်ရအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဥပမာ – ကျွန်မ စကားပြောနေတဲ့အခါ ရှင် ဂရုမစိုက်ရင် ကျွန်မ စိတ်ညစ်တယ် လို့ ပြောတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကလေးကို မဲပြီး ” နင်က အေးတိအေးစက်နဲ့ ဂရုမစိုက်ဘူး။ နင့်အဖေလိုပဲ” လို့ သွားမဆူပါနဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူတို့က ကိုယ့်ယောက်ျားကို လှောင်ရင်လဲ လက်သင့်မခံပါနဲ့။
ယောက်ျားတွေ ပျော်ရင် အိမ်ထောင်တစ်ခုလုံး ပျော်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရင်၊ အချစ်ခံရရင် ကျွန်တော်တို့ကလဲ ပြန်ချစ်မှာ မို့လို့ပါပဲ။ လုပ်ရခက်ပေမယ့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြန်ရမှာပါ။